Misy vehivavy mpiara-miasa amin’ireo jiolahy izay aditoha mikotrika ny fanafihana ka mody milaza io ramatoa io fa mahantra ka
mangataka vary. Tamin’ny fotoana itsofohan’io vehivavy io ny trano no angalany ny loharanom-baovao rehetra mahakasika ny ao an-trano sy ny entana tahaka ny vary sy ny entana sarobidy, avy eo dia miteny amin’ireo jiolahy namany izy ny entana azo robaina ao. Nisy namaky ny tranon’ny vehivavy iray tao Ambalanomby, Manja ka very tamin’izany ny vary mitentina 700Kg. Noho ny loharanom-baovao matotra azo tamin’ny fokonolona dia voasambotry ny polisy ny iray tamin’izy ireo. Taorian’ny fanadihadiana izay natao ity jiolahy voasambotra ity no nilazany ireo namany sy ny tetik’ady nentin’izy ireo nanatanteraka ny asa ratsiny. Niaiky izy ireo fa namaky io trano io. Mandray ny andraikiny avy hatrany ny polisim-pirenena any amin’ny distrikan’i Manja manoloana ny vaky trano nisesy izay mampitaraina ny mponina. Izay no naharavan’izy ireo ny tambajotran-jiolahy niaraka tamin’ny vehivavy atidoha mikotrika ny teti-dratsy.